Weerarkii Westgate waxaa ku nafwaayey 65 qof.
Xasan Dhuxulow oo weerarkaasi ku dhintay waxaa da’diisu ay aheyd 23-sano jir, waxa uu ku dhashay dalka Soomaaliya, hase yeeshee isaga iyo qoyskiisa ayaa dalka Norway ku yimid qaxooti ahaan sanadkii 1999.
Police-ka Norway oo aan la xiriiray ayaa ii xaqiijiyay in baaristaasi ay soo dhammaatay. Afhayeen u hadlay Police-ka dalkaasi oo lagu magacaabo Bernsen ayaa u sheegay wargayska Aftenposten ee dalkaasi kasoo baxa in Xasan Dhuxulow uu kamid ahaa raggii argagixisada ahaa ee weerarka gaystay, islamarkaana lasoo gunaanaday baaristaasi.
Waxaa jirtay in police-ku ay ka shakiyeen ninkaasi laakiin ma jirin cadaymo loo hayay oo xiligaasi lagu xiri karay, ha yeeshee hadda ayay u cadaatay in uu ahaa nin argagaixiso ah kadib baaritaan lagu sameeyay maydkiisii.
Police-ka dalka Kenya ayaa sheegay in Xasan Dhuxulow uu ka gudbay xuduudka Kenya isagoo tagay Soomaaliya weerarka ka hor. Waxaa la rumaysan yahay in uu ka shaqeeyay isku-xirka unugyo argagixiso oo ka jiray Soomaaliya iyo Kenya weerarka ka hor.
Barnaamij Taxane ah: SOOL iyo SANAAG